နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: IRC Chat မှ ဟာသများ (၁)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:36 PM
Thandar Lwin June 24, 2009 at 6:46 PM
to be continue? willbwait & read.
Thandar Lwin June 24, 2009 at 6:54 PM
I will follow ur instruction "how to make shan hta min chin"
The whole day I read ur blog. nice to read .
khin oo may June 24, 2009 at 9:36 PM
24 Jun 09, 21:28
ုkom: အွန်လိုင်း ချက်တင် မထိုင်ဘူးလို့မသိပါ။ ရှင်းပြတော့မှ ရေးတေးတေးသဘောပေါက်ပါတယ်။ အတော်အတွေ့အကြုံရှိပုံရတယ။်
မီးမီးချစ် June 25, 2009 at 12:10 AM
မီးချစ်ဆို ချက်ရွန်း ထဲ ဝင်ပြီးရင် မချက်ဘူး.. ထိုင်ဖတ်ပြီး ရယ်တာပဲ..
ဒါ gtalk နဲ့ မချက်ခင်တုန်းက
စန္ဒကူး June 25, 2009 at 2:19 PM
အရင်ကသုံးဖူးတယ်။။။ အရမ်းရီရသလို အွန်လိုင်းတက်တိုင်း irc ထဲမ၀င်မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်...း)